सेमील्ट: वेब स्क्रैपिंग सफ्टवेयर - शीर्ष सुझावहरू
धेरै वेब पृष्ठहरु र वेबसाइटहरु द्वारा प्रदर्शित डेटा केवल ब्राउजर को उपयोग गरेर मात्र पहुँचा जा सकता. प्राय: साइटहरूले कार्यात्मकताहरू प्रस्ताव गर्न असफल भएको छ जहाँ तपाइँ आफ्नो लक्ष्य-डेटा तपाईंको मेसिनमा बचत गर्न सक्नुहुन्छ. डेटा सङ्कलन गर्ने मात्र विकल्प भनेको तपाईको लक्षित डेटा म्यानुअल रूपमा टाँस्नुहोस्, जुन एक जटिल र समय-उपभोग कार्य हो।.
यही कारण छ कि तपाईलाई आवश्यक छ वेब परियोजनाहरु वेब परियोजनाहरु पूरा गर्न को लागि - high pr link. वेब स्क्रैपिंग, वेब कटाई को रूपमा पनि जानिन्छ, वेब स्क्रैपिंग सफ्टवेयर को उपयोग गरेर लक्षित पाठ को निकालन को एक प्रविधी हो. वेब स्क्रैपिंग सफ्टवेयरले वेब पृष्ठहरु र वेबसाइटहरु बाट डेटा पुन: प्राप्त गर्दछ जसमा प्राप्त जानकारी तालिका तालिका ढाँचामा वा तपाईंको स्थानीय मेसिनमा बचत गरिएको छ।.
वेब स्क्रैपिंग ट्यूटोरियलले प्रारम्भकर्तालाई वेब र गतिशील साइटहरूबाट जानकारी हटाउन मद्दत गर्दछ. अक्टोपारेले वेबसाईटहरू र वेब पृष्ठहरू स्क्रैप गर्न वेब स्क्रैपिंग सफ्टवेयर कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर ट्यूटोरियल प्रदान गर्दछ. धेरै अवस्थामा, वेब स्क्रैपिंग सफ्टवेयर या त कन्फिगर गरिएको छ कि विशेष साइटहरूमा कार्य गर्न वा ब्राउजरहरूको लागि अनुकूलित.
अक्टोपारे के साथ, तपाइँ क्लाउडमा उपयोगी डेटा निकाल्न वा स्थानीय मेसिन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ. क्लाउडमा स्क्रैपिंगले स्थानीय मिसिनहरूमा अधिवेशन गरेको छ. डाटा स्क्रैप गर्दा हार्डवेयर क्रश र अनुकूलन ब्याकअप मुख्य कुराहरू तपाईँले विचार गर्नुपर्छ.
अक्टोपारे वेब स्क्रैपिंग सफ्टवेयर हो
अक्टोपारेले वेब स्क्रैपर्स लाई तीन मोडहरूमा डाटा निकाल्न अनुमति दिन्छ। वेबमा निःशुल्क प्रदान गरिएको छ. तपाईले सफ्टवेयरको विजार्ड मोड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ एकल वेब पेजहरू, URL हरु र वेब पृष्ठहरू स्क्रैप गर्न.
यो वेब स्क्रैपिंग को सबै भन्दा लोकप्रिय मोड हो. डाटा निष्कर्षणको उन्नत विधि URL हरू, पाठ सूची, चर सूची, र निश्चित सूचीमा आधारित छ. मोड एक एकल र धेरै वेब पृष्ठहरू निकाल्न प्रयोग गर्न सकिन्छ.
अक्टोपारे के साथ, तपाईं आफ्नो डेटा सेकेन्डको बिषयमा प्राप्त गर्नुहुन्छ. यदि तपाईं वेब स्क्रैपिंग स्क्रिप्टमा जाँच्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ अक्टोपारे6को रिलीजमा आएको हुनुपर्दछ.2संस्करण. अक्टोपारे स्मार्ट मोड वेबमा निशुल्क शुल्क प्रदान गरिएको छ. नयाँ जारी संस्करणले तपाईंलाई इन्टरनेटबाट डाटाबेस संरचित तालिकाहरूमा पुन: प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ.
अक्टोपारे स्मार्ट स्मार्ट मोड प्रयोग गर्न, URL लाई वेब पृष्ठमा पेस्ट गर्नुहोस् जुन तपाई स्क्रैप गर्न चाहानुहुन्छ. "स्मार्ट" बटन क्लिक गर्नुहोस् र पृष्ठको रूपमा संरचित तालिकाहरूमा बदलिन्छ हेर्नुहोस्.
अक्टोपारे वेब स्क्रैपिंग सफ्टवेयर द्वारा स्क्रैप गरिएको डेटा मा निर्यात गरिएको छ:
अक्टोपारे API को प्रयोग गरेर डाटा निर्यात गर्न, तपाईले एक व्यावसायिक खाता पाउनु पर्छ र डाटामा क्लाउडमा एक भन्दा बढी कार्य चलिरहेको डेटाबाट प्राप्त गरियो. तपाईंले गर्नु पर्छ सबै खोजी बाकसमा तपाईंको प्रयोगकर्तानाम र पासवर्ड फिड गरेर पहुँच टोकन पाइरहेको छ.
अक्टोपारे के साथ, तपाईं छिट्टै HTML तालिकाबाट डाटा निकाल्न र डेटा अल्पविराम विभाजित मानमा निर्यात गर्न सक्नुहुनेछ।.
स्क्रैप गरिएको डाटा तपाईंको MySQL डाटाबेस वा SqlServer मा निर्यात गर्न सकिन्छ।.
अक्टोपर्स उन्नत विशेषताहरु
यो वेब स्क्रैपिंग सफ्टवेयर अन्त-प्रयोगकर्ताहरु लाई निःशुल्क उन्नत सुविधाहरु प्रदान गर्दछ।. यो सुविधा समावेश छ:
अक्टोपारे एक शीर्ष रेट गरिएको वेब सफ्टवेयर सफ्टवेयर छ जुन वेब पृष्ठहरु र साइटहरु बाट डाटा निकाल्छ. अक्टोपारे के साथ, तपाईं क्लाउड मा एक निष्कर्षण चलाएर आफ्नो डेटा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ वा स्क्रैपिंग साइटहरू तपाईको स्थानीय मेसिनको साथ. नेटवर्किङ साइटहरू, डाइरेक्टरीहरू, र जागिर पोस्टिंगहरू स्क्रैप गर्न तपाईंको पीसीमा अक्टोपारेस डाउनलोड र स्थापना गर्नुहोस्.